Sidee in ay ka jawaabaan su'aalaha kala doorashada badan | USAHello Fasalka | USAHello
Sidee in ay ka jawaabaan su'aalaha kala doorashada badan
Su'aalo badan oo ku saabsan baaritaanka noqon doonaa su'aalaha kala doorashada badan. Waxaad u baahan tahay in la ogaado sida looga jawaabo su'aalaha kala doorashada badan si aad u gudbin kartaa baaritaanka.
su'aalaha kala doorashada badan hal su'aal oo in ka badan hal jawaab. mid ka mid ah jawaabaha oo keliya waa mid ka mid sax ah. Waa in aad doorato jawaabta ugu fiican.
Baro sida loo dooro jawaabta ugu wanaagsan ee su'aalaha kala doorashada badan.
Waxaa jira 5 waxyaabo aad sameyn waa in aad doorato jawaabta ugu fiican ee su'aalaha kala doorashada badan.
Ka fikir oo ka mid ah 5 waxyaabaha sida dibba 5 tallaabooyinka:
Step 1 - akhri fariimaha
Step 2 - akhriyo su'aasha
Step 3 - akhri qoraalka
Step 4 - akhriyo doorashooyin jawaabta
Step 5 - dooro jawaabta ugu wanaagsan
Layliska ah 5 tallaabooyinka la this badan su'aal imtixaanka doorashada dhabta ah.
tilmaamaha: Read tuducdan ee qoraalka. Markaas dooro jawaabta ugu wanaagsan ee su'aasha.
ina Elizabeth ayaa soo xirtay maaliyada isku jir rito maalin kasta. "Waa maxay sababta aan xiran mid ka mid ah funaanadaha kale?"Ayay tidhi. Laakiin isagu ma rabto in aad - maaliyada jir ah oo xamar (midabkiisu jecel) iyo magaca kooxda uu ugu jecel yahay oo waxay lahayd on dhabarka. Hal maalin, Elizabeth ku jiray dukaan gacan labaad ah. flash A caan ah oo cas on tareenka maaliyada ragga qabtay waxay il. Waxay u eegay xagga dambe ee maaliyada. Waxay lahaa isku magaca kooxda! Haddaba waxay ahayd size wiilkeeda. Marka laga reebo isagoo godad no, maaliyada ahaa inay isku wiilkeeda.
su'aasha: In text this, waa maxay erayga isku mid macnaheedu?
A. kala duwan
B. isku mid
tilmaamaha waxay ku yidhaahdeen, "Read tuducdan ee qoraalka. Markaas dooro jawaabta ugu wanaagsan ee su'aasha. "
Haddaba aad u ogaato wixii aad leedahay in la sameeyo. Aad doonaysid in aad eegto jawaabaha oo dhan iyo go'aan kaas oo ah mid ka mid ah ugu wanaagsan ee u jawaabay su'aasha.
Su'aasha ayaa sheegay in, "In text this, waa maxay erayga isku mid macnaheedu?"
Fiiri erayada muhiimka ah ee su'aasha si aad u hesho maskaxdaada diyaar u ah inay ka heli jawaabta qoraalka.
Su'aashu waxay tahay: "In this text, waa maxay erayga isku mid macnaheedu?"Erayada furaha ah waa text iyo macnaheedu. Su'aasha waxa ay tahay aad weydiisanaya macnaha eray gabal qoraalka lagu siiyey. ereygaas waa isku mid.
Hadda oo aad ogtahay waxa su'aashu waxay tahay, waxaad qaadan kartaa talaabo kale.
Read qoraalka kore inta aad sii su'aasha in maankiinna: "In text this, waa maxay erayga isku mid macnaheedu?"The text kaa caawin doona inaad aragto waxa erayga hab.
Read oo dhan ka mid ah doorashooyin jawaab by mid ka mid ah. Ha weli dooran jawaabtaada. First, Iskutallaab off ah khalad jawaabi doorashooyinka.
Waayo, jawaabta doorasho kasta, naftaada weydii: "Ma this jawaab ugu fiican? Ma this waxa isku mid hab?"
Bal aynu eegno doorashooyin jawaabta.
Fiiri jawaab doorashada A: kala duwan
Ma this waxa isku mid hab? Waxba qoraalka ka dhigaa lahaa dareenka haddii ay la micno kala duwan. Sidaas jawaabi doorashada A waa khalad.
Fiiri jawaab doorashada B: isku mid
Ma this waxa isku mid hab? B waa jawaab fiican. Waxa macno for qoraalka. Ma this jawaab ugu fiican? Ha weli dooran. Xasuuso inaad ku akhriyey dhammaan doorashooyinka ay dhacdo in ay jiraan waa mid ka mid ah si fiican.
Fiiri jawaab doorashada C: xoog
Ma this waxa isku mid hab? Ma jiraan wax qoraalka ku saabsan yahay in ay xoog ama aan xoog badnayn. isku mid ma in la sameeyo waa xoog badan yahay. Sidaas jawaabi doorashada C waa khalad.
Fiiri jawaab doorashada D: jecel
Ma this waxa isku mid hab? eraygii jecel waa in qoraalka, laakiin haddii aad loo isticmaalo jecel meeshii ay isku mid, qoraalka dambe dareen aan ka dhigi lahaa. Sidaas jawaabi doorashada D waa khalad.
Waxaad dooran doonaa B sababtoo ah waa jawaabta ugu wanaagsan ee su'aasha, "In text this, waa maxay erayga isku mid macnaheedu?"Si aad u dooratid jawaab, calaamadee sanduuqa ama goobaabin socota, waxa uu.
Mar kasta oo aad ka jawaabto su'aalaha kala doorashada badan, isticmaalaan 5 tallaabooyinka!
Haddaba daawado this video in ay dib u 5 tallaabooyinka la su'aal ka duwan.